मैले अन्य पूरक सेवामा परिवर्तन गर्दा वा GX30 ग्राहक सदस्यता सेवा बन्द गर्दा मेरो Hotspot Booster तथा Turbo Booster को कोटा तथा वैधता अवधिको के हुन्छ ?
बुस्टरहरूको बाँकी कोटा तथा वैधता अवधिलाई हटाइनेछ । प्रयोग नगरिएको कुनै पनि कोटा तथा वैधता अवधिको लागि शुल्क फिर्ता गरिने छैन
म Turbo Booster तथा Hotspot Booster को ग्राहक कसरी बन्न सक्छु ?
तपाईं निम्न च्यानलहरू मार्फत बुस्टरहरूको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्छ:
- MY UMobileApp - Add-Ons मेनु
- UMB - *118*1*2# डायल गर्नुहोस्
- SMS - (Turbo Booster को लागि) ON TURBO वा (Hotspot Booster को लागि) ON HOTSPOT टाइप गरी 28118 मा पठाउनुहोस्
तपाईं निम्न च्यानलहरू मार्फत बुस्टरहरूको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्छ:<br> - MY UMobileApp - Add-Ons मेनु<br> - UMB - *118*1*2# डायल गर्नुहोस्<br> - SMS - (Turbo Booster को लागि) ON TURBO वा (Hotspot Booster को लागि) ON HOTSPOT टाइप गरी 28118 मा पठाउनुहोस्
हो, तपाईं अझै पनि Hotspot तथा Turbo Booster हरूका साथमा सामान्य बुस्टरको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, याद राख्नुहोस् कि3वटै बुस्टरहरूको वैधता अवधि सफलतापूर्वक ग्राहक सदस्यता सेवा लिए पछि लागू हुन्छ । तपाईंको प्लान अनलिमिटेड डाटा कोटाका साथ नै आउने भएकोले हामी तपाईं सामान्य बुस्टरको सट्टा जहिल्यै पनि Turbo Booster को ग्राहक बन्न सिफारिस गर्छौं